Lahatsary: Tsy Manana Hialofana Saingy Tsy Voatampim-Bava · Global Voices teny Malagasy
Lahatsary: Tsy Manana Hialofana Saingy Tsy Voatampim-Bava
Voadika ny 03 Oktobra 2017 12:05 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, বাংলা, Italiano, Català, English
Avy any Kolombia hatrany Kanadà, mandalo ny Royaume-Uni sy Etazonia, maro ireo fandraisana andraikitra teraka mba hanomezana fitenenana ireo olona farahidiny sy adinon'ny fiarahamonina: ny ankizy, ny vazimba teratany, ireo mpifindramonina ary ny vondrom-piarahamonina pelaka.
Homele$$ de Bob With CCBy
Efa hatry ny taona maro i José Alejandro González, kolombiàna mpanatontosa lahatsary, no nandrakitra sy nizara ny fiainan'ireo tsy manana hialofana ao Kolombia. Tamin'ny taona lasa, noho ny fanampian'ny The Insider Project (Hita avy ao anatiny), marobe tamin'ireo lahatsary fanadihadiany no natambatra ho anaty sarimihetsika iray lava kokoa, The Truth (Ny marina) sy The House (Ny trano).
Maro ireo tsy manana hialofana tao Bogota no narahan'ny The Truth,izay miresaka ny fiainan-dry zareo ary mikitika ireo endrika politika, sosialy sy toekarenan'ny fiainana an-dalambe. Ny iray tamin'ireo mpandray anjara dia tovolahy 15 taona izay mitantara ny fahatapahan'ny fifandraisany tamin'ny fianakaviany, ny fiankinandoha tamin'ny zava-mahadomelina, ny firenireniny tany amin'ireo faritra tena mampidi-doza ao an-tanàna mba hahita rongony ary ny faniriany ho afaka ny ho “tsara”,hody an-trano ary hankalaza krismasy any an-trano miaraka amin'ny fianakaviana, any amin'ny lafiny ilany amin'ny tanàna.
The House indray mitondra antsika ho any “an-tranon'ny olona iray tsy manana hialofana : anaty lavaky ny fivarinan-drano maloto iray ary ao anaty faritra fiaingan'ireo tariby, ambanin'ireo araben'ny afovoan-tanànan'i Bogota. Ao no misy ny fandriana, ireo boky, ny vata fandraisampeo, ny jiro fanao am-paosy ary ilay alika an'eritreritr'i Darío Acosta.
Tany amin'ny taona 90, niaina teny an'arabe i Mark, teny amin'ny Hollywood Boulevard. Nidoroka zavamahadomelina izy ary nivarotra tamin'ireo mpizahatany ny sarin'ilay “iguane”-ny (karazana androngo lehibe) . Ankehitriny, iny no mpitarika ny tetikasa Invisible People (ireo olona tsy taza-maso) izay mahatonga azy hitety an'i Etazonia sy Kanadà mba hangataka amin'ireo olona tsy manana hialofana hitantara ny tantaran-dry zareo sy hiady ho an'ny zony. Tamin'ny fandehanany tany Kanadà no nahamarihany ny fifandraisana misy amin'ny maha-tsy manana hialofana sy ny maha-ao anatin’ “ireo Olona Voalohany” (ny Amérindiens). Nanomboka teo, ezahany ny tsy haka fotsiny ny tantaran'izy ireny sy hampiseho izay toetra iavahany mba hitahirizana ny fihetsehampo ara-kolontsainy, fa koa , tsy maintsy manantena isika, manao izay hanovàna ny teodraharaha iainan'izy ireny.
Ny antsafa eto ambany dia manome ny fitenenana ho an'i Dave Ward, talen'ny fifandraisana amin'ireo vazimba teratany ao Homeward Trust Edmonton. Resadresaka manana ny lanjany io, ka mandritra izany i David no miresaka momba ny kolontsain'ny vazimba teratany sy ireo vahaolana hampitsaharana ny fangozohozoana lalina. Heveriko fa ny fihainoana no tena manandanja be indrindra. Tsy maintsy mihaino ny kolontsain-dry zareo isika ary mampiditra ireo vazimba teratany ho ao anatin'ny fikarohana sy fametrahana vahaolana.
Iray tamin'ireo antsafa tena nanamarika indrindra ny niarahana tamin'i Alma. Renibe iray tsy manana hialofana i Alma, ao Winnipeg, izay miady irery mba hamita ny fianarana ambony ataony hahazoana diplaoma heveriny fa hanampy azy hanatsara ny fiainany sy ho afaka haka indray ny zafikeliny izay napetraka aminà sampan-draharaha sosialy mandra-piandry ny fahafahany manome azy fiainana tsaratsara kokoa.
Afaka ahitàna lahatsary maromaro ao amin'ny Youtube an'ny Invisible People, ary azonareo atao koa ny manaraka an'i Mark ao amin'ny Twitter: @invisiblepeople.
Ao Bradford, any Angletera, Hope Housing (Ny Tranon'ny Fanantenana) dia manolotra fialofana ho an'ireo tsy manana hialofana tsy mba manan-jo hahazo fanampiana, ny ankabeazany dia satria mpifindramonina tsy manana antontan-taratasy, tsy manana anton'asa ary tsy manana antom-pivelomana afa-tsy ny miaina any anaty toerana bodoina amin'ny fomba tsy ara-dalàna na eny an'arabe. Nifantohan-dry zareo ao anatin'ny lahatsary The Not So Promised Land (Tsy ilay Tany Kanàna Izay Nampanantenaina), ny olan'ireo olona avy any Eoropa Atsinanana, mpifindramonina ara-toekarena tonga hitady asa any Angletera saingy tonga saina hoe tsy mora araka izay noeritreretiny ny fandehan-javatra. Manolo-tànana ho azy ireo ny Hope Housing mba tsy hijanonan-dry zareo eny an'arabe no sady manampy azy ireo hahita izay anton'ny nahatongavany ao Angletera: ny asa.
Diamond Stylz mamaritra ny tenany ho toy ny vehivavy iray feno rehareha, nanova fananahana ary hafa fihodirana, teraka avy any Indianapolis, any Indiana, ary monina any Houston, Texas. Betsaka ireo lohahevitra resahany ao amin'ny fantsony Yuotube, toy ny resaka miralenta, ny foko sy ny fananahana. Ao anatin'ity lahatsary ity, iverenany ny zavatra niainany amin'ny naha-tsy nanana hialofana azy, ary ny fomba nahitàny hoe amin'ny naha-vehivavy nanova taova azy saingy tsy mitondra otrikaretina VIH , tsy nekena ny hidirany tamin'ireny toerana fampiantranoana ireny, na tany amin'ireo ho an'ny vehvavy izany, ny ho an'ny lehilahy, na ny ho an'ireo nanova taova saingy voamarina fa misy otrikaretina VIH. Raha tsy tafahaona taminà olona iray nanolo-tànana azy mba hiarenany izy, dia mety ho nanome lamosina azy ny rafitra.